Kadib Miinadii Uu Wakiilka Pual Pogba Ee Mino Raiola Ku Qarixiyay Old Trafford, Real Madrid Oo Dalabkan U Gudbisay Man United. - Gool24.Net
Kadib Miinadii Uu Wakiilka Pual Pogba Ee Mino Raiola Ku Qarixiyay Old Trafford, Real Madrid Oo Dalabkan U Gudbisay Man United.
Wakiilka Pual Pogba ee Mino Raiola ayaa xalay war dhul gariir ku noqday Manchester United waxa uu ka sheegay xaalada xidiga reer France wuxuuna bixiyay xogta dhabta ah iyo sida ay wax u socdaan.
Mino Raiola waxa uu xaaladii ugu xumayd ku abuuray Manchester United kadib markii uu saxaafada ka sheegay in qof kasta oo United ka tirsan ee min tababare ilaa mulkiile ay ogyihiin in Pogba ay ka go’antaahay in uu baxo.
Waxa kale oo oo Mino Raiola sheegay in ay dhexda kaga jiraan hanaanka uu xidiga reer France kaga baxayo United taas oo keentay in qaab qarax oo kale ah uu ka abuuray Old Trafford.
Real Madrid oo ka danbaysa qorshaha ay Pual Pogba iyo wakiilkiisa Mino Raiola uu midba hal mar saxaafada sida qaawan uga hadlay ayaa markeeda miiska soo saartay dalab ay doonayso in ay ku samirsiiso maamulka Old Trafford.
Real Madrid ayaa Manchester United u dirtay dalab ka kooban lacag 72 milyan gini ah oo lagu daray Gareth Bale ama Isco haddaba kii ay Man United doonayso.
Inkasta oo ay Manchester United markii hore ku adkaysatay in aanu Pual Pogba kooxdeeda iib ka ahayn, hadda waxaa lagu qasbayaa in ay laba daran mid doorato oo kala ah in ay sii haysato ciyaartoy aan faraxsanayn isla markaana go’aan ku gaadhay in uu baxo.
Waxa kale oo hadda United u furan in ay aqbasho in Pual Pogba baxo balse ay wada xaajood la gasho Real Madrid isla markaana ay soo bandhigto nooca dalabka ay ka doonayso.
Sida uu shaaciyay wargayska Manchester Evening Standard, Real Madrid ayaa soo gudbisay dalab ka kooban 72 milyan gini +Gareth Bale ama Isco waana nooc dalab oo ay Madrid u aragto in ay Pogba ku heli karaan.
Pual Pogba ayaan wali ku soo laaban xarunta tababarka kooxdiisa United inkasta oo Solskjaer iyo ciyaartoyda qayb ka mid ahi ay maalmihii ugu danbeeyay tababarka qaadanayeen.
Si kastaba ha ahaatee, Pual Pogba iyo wakiilkiisa Mino Raiola ayaa talaabo wayn hore ugu qaaday, hamigii ay ku doonayeen in ay Real Madrid u wareegaan, waxayna sameeyeen hadalo waxyeelo u keenaya iska caabintii Man United.